भक्तपुरमा २७ गते निर्वाचन गराउन एन्फाको पत्राचार – Neplays.com
भक्तपुरमा २७ गते निर्वाचन गराउन एन्फाको पत्राचार
By Neplays	 On Mar 28, 2018
१४ चैत, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले भक्तपुर जिल्लाको जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन चैत २७ गतेभित्र गरिसक्न पत्राचार गरेको छ ।
असन्तुष्ट तीन क्लवले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मंगलबार फिर्ता भएपछि भक्तपुरको जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
एन्फा प्रवक्ता सञ्जीव मिश्रले भक्तपुरको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विश्व फुटबल महासंघ फिफाको अनुमति लिएर तत्कालै केन्द्रीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जानकारी दिए ।
यता भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष गौतम सुखजुले भने एन्फाको पत्र आफूले अहिलेसम्म नपाएको बताए । ‘बिहान अध्यक्ष (नरेन्द्र श्रेष्ठ) ज्यूसँग यसबारे छलफल भएको हो, निर्वाचनको मिति तोकेर पत्र आएको मलाई जानकारी छैन ।’ सुखजुले भने ।
साथै उनले भक्तपुरमा आफूहरुलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दा फिर्ता लिइएको बारे पनि मिडियाबाट मात्रै थाहा भएको बताए ।
अध्यक्ष सुखजुले एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार खोसिन लागेको भन्दै पाटन उच्च अदालतमा अर्काे मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यही मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै एन्फाको बुधबार हुनुपर्ने निर्धारित निर्वाचन सरेको थियो ।
विवाद समाधानको प्रक्रियामा गएसँगै उनले पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने अपेक्षा गरिए पनि सुखजुले भने निर्वाचनबाट प्रतिनिधिको छनोटसँगै उम्मेदवार बन्न पाउने आफ्नो अधिकारको पनि सुनिश्चत हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले भने, ‘अब भक्तपुरको निर्वाचनको मात्रै कुरा होइन, केन्द्रीय चुनावमा म उम्मेदवार पनि बन्न पाउनुपर्छ, त्यसको सुनिश्चित नभएसम्म जिल्लाको चुनाव भएर मात्रै अर्थ राख्दैन ।’
तर, एन्फाकाे बिधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्नका लागि जिल्ला संघकाे प्रतिनिधि नै बन्न पाउनुपर्छ भन्ने छैन । पाँच वर्ष फुटबलमा लागेकाे जाेसुकै उम्मेदवार बन्न सक्ने बिधान छ ।
यही विधानअनुसार मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ एन्फाकाे केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार छन् । तर, सुखजु भने चुनावकाे म्याण्डेड पूरा गर्न छाडेर अदालती प्रक्रिया लम्ब्याउने याेजनामा देखिएका छन् ।
यसअघि एन्फाले मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघलाई चैत २३ गतेभित्र निर्वाचन गराउन सोमबार नै पत्राचार गरिसकेको छ ।
युरोकपमा आज राति कुन कुन टिम भिड्दै ?
नेपाली फुटबल टिम आज राति काठमाडौं आइपुग्ने
डेनमार्कका खेलाडी एरिक्सन खतरामुक्त, घटना कसरी भएको थियो ?
लुकाकू र मुनिएको रेकर्ड गोलमा बेल्जियमको विजयी शुरुवात
कोपा अमेरिका : भेनेजुएलाका खेलाडीसहित १२ जनालाई कोरोना संक्रमण
भारका कारण स्वीट्जरल्याण्ड र वेल्सले बराबरी खेले